Seenaa Alamayyoo Dhugumaa -
Seenaa Alamayyoo Dhugumaa
By fmegersa | March 21, 2018
← Saudi Arabia Stakes A Claim On The Nile SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 21, 2018 →
3 thoughts on “Seenaa Alamayyoo Dhugumaa”
hawwinee Barii March 21, 2018
diinaan akka butame barreessaa, hirmaannaa inni qabsoo keessatti qabu tarreessite. Yoo kubbuun jiraate akka diinni ajjeesuuf ragaa itti bahuu barbaadde moo maal gochuu barbaadde. Diinni isa hidhe osoo aangoo irra jiru fi osoo inni diina kanaan butamee jiru kana barreessuun ragaa irratti bahuun ajjeesaa jechuu dha. Yoo haga ammaa lubbuun jiraate sababa barreefama kee kanaan Alamayyoon du’uu waan danda’uuf guyyaa tokko itti gaafatamta. Waa barreessuu qofa osoo hin taane yoomi barreessuu akka qabnu fi maaliif akka barreessinu beeku qabna.
ABDULKARIIM March 21, 2018
Baay’ee waliin turre,Alamayo sabaan boonummaa qofaa miti,barataa qofaa miti,Nama aadaa Oromo jaalatu.Haalan sirba Aadam qasim,Aadam Haarun fi Ali Birraa sirbuun nu bashannansiisa ture .
Dabales sirba Zarihun Wadajoo fi kan bira.
Marsa tokko waliin leenjifamne. Blmagu Moonaa qondaalaa keessatti.
Nama nama hundaan walii galu,t,bashaasha namaa ti.
Nama tokko irraa akkaan dhaga’eetti Zuway argee waliin turree,.Zuway keessatti qubee fi Afaan ingilizi barsiissa naan jedhe,
Mee nama tokko kan Zuway yeroo dheeraf ture gaafadhe yoom akka akka tahe.
Namoota biraas kan akka jaal Araarsoo Abbaa humnaa qunnama yoom akka achi ture anis kan beeku kan biroo gaafadha.